အရေပြားကင်ဆာကာကွယ်ခြင်းနှင့်ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း - Hello Sayarwon
လေ့လာထားချက်တစ်ခုအရ အချိန်တစ်နာရီတိုင်း လူတစ်ယောက်ဟာ အရေပြားကင်ဆာနဲ့ အသက်ဆုံးရှုံးနေရပါတယ်။ ဒီအန္တရာယ်များတဲ့ ရောဂါဟာ စောစီးစွာ သိရှိမယ်ဆိုရင် ကုသလို့ ပျောက်ကင်းနိုင်ပေမယ့် လူတော်တော်များများက နောက်ကျတဲ့အခြေအနေမှ အဲ့ရောဂါရှိမှန်း သိကြပါတယ်။ ကံကောင်းတာက ရိုးရှင်းထိရောက်တဲ့ နည်းလမ်းတွေကို လိုက်နာပြီး သင့်အရေပြားကို ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အချက်တွေကနေ ကာကွယ်ဖို့ အရာတော်တော်များများ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါပြီ။
အရေပြားကင်ဆာဆိုတာ ထူးဆန်းတဲ့ အကြောင်းအရာ မဟုတ်တော့ပေမယ့် လူတော်တော်များများက ဘယ်လို ကာကွယ်ရမလဲဆိုတာကို မသိကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီရောဂါက မျိုးရိုးလိုက်တာကနေ ပြင်ပသက်ရောက်မှုအထိ အချက်အလက် အများကြီးရဲ့ ရလဒ်တစ်ခု ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဖြစ်များစေတဲ့ အချက်တစ်ခုကတော့ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် သင့်မှုပါပဲ။ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ဟာ ဗီတာမင်ဒီ ကြွယ်ဝပေမယ့် တချိန်တည်းမှာပဲ အရေပြားအတွက် မမြင်နိုင်တဲ့ လူသတ်သမားလည်း ဖြစ်နေပါတယ်။
လူတစ်ယောက်က ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် အောက်မှာ အချိန်အတော်ကြာ နေမယ်ဆိုရင် (နေပူစာလှုံခြင်း သို့မဟုတ် tanning bed) သင့်အရေပြားကို လောင်စေနိုင်ပြီး အရည်ကြည်ဖုတွေ ဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုမျိုး အရေပြားပြဿနာတွေက အရေပြား တစ်သျှူးကို တိုက်ရိုက် ထိခိုက်စေပါတယ်။ ခုခံရေးဆဲလ်တွေက အပျက်အစီးတွေကို ကုစားဖို့ သွေးကြောထဲက သွားတဲ့အခါ ပူလောင်တဲ့ ခံစားမှုကို ထုတ်ပေးပါတယ်။ ဒီအရေပြားပျက်စီးမှုကို ကင်ဆာရောဂါရဲ့ ပထမဆုံး ခြေလှမ်းလို့ သတ်မှတ်ရပါမယ်။ ဒါ့အပြင် အဆိပ်သင့် ပစ္စည်းတွေနဲ့ ထိတွေ့ခြင်းလိုမျိုး အကြောင်းအရာတွေကလည်း အရေပြားကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ချေကို ပိုများစေနိုင်ပါတယ်။
အရေပြားကို ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် UV ကနေ ကာကွယ်ဖို့ ဒီရိုးရှင်းတဲ့ အချက်အလက်တွေကို လိုက်နာပါ။
· နေအရမ်းပူတဲ့အချိန် အပြင်ထွက်ခြင်းကို ရှောင်ပါ – ပြင်းထန်တဲ့ နေပူပူအောက်မှာ သွားလာခြင်းက သင့်ကို အရေပြားကင်ဆာ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ နေအရမ်းပူတဲ့အချိန် မနက် ၁၀နာရီကနေ ညနေ ၄နာရီအတွင်း အပြင်မထွက်ဖို့ အကြံပေးထားပါတယ်။ lightening treatment ခံယူနေချိန်မှာ ထီး၊ သစ်ပင် သို့မဟုတ် တခြားအရိပ်ရတဲ့ နေရာအောက်မှာ အရိပ်ခိုပြီး သင့်အရေပြား ပျက်စီးနိုင်ချေကို လျှော့ချနိုင်ပါတယ်။
· အချိန်တိုင်း နေလောင်ခံလိမ်းဆေး လိမ်းပါ – နေလောင်ခံလိမ်းဆေးတွေက UV အားလုံးကို မစစ်ထုတ်ပေးနိုင်ပါဘူး၊ အထူးသဖြင့် melanoma ဖြစ်စေတဲ့ ရောင်ခြည်ကိုပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီလိမ်းဆေးတွေက နေရောင်ခြည်ကာကွယ်မှု အစီအစဉ်တစ်ခုလုံး ခြုံကြည့်မယ်ဆိုရင် အဓိကနေရာက ရှိနေပါတယ်။ နေလောင်ခံလိမ်းဆေးတွေက သင့်အရေပြားကို UV တွေရဲ့ အန္တရာယ်ကနေ လုံးဝကာကွယ်ပေးနိုင်တာ မဟုတ်ပေမယ့် နေလောင်တာ ကာကွယ်ဖို့အတွက်တော့ အထိရောက်ဆုံးပါ။ UVA နဲ့ UVB ၂မျိုးလုံးပါပြီး SPF ၃၀နဲ့ အထက်ပါတာကို ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။
· Tanning bed ကို ရှောင်ပါ – နေလောင်တဲ့ အသားအရည်ကို အလှအပရဲ့ သင်္ကေတလို့ သတ်မှတ်ထားပေမယ့် tanning bed သုံးတာက သင့်ကို အရေပြားကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ချေ သိသိသာသာ ပိုများသွားစေနိုင်ပါတယ်။ လေ့လာထားချက်တစ်ခုအရ မကြာခဏ နေလောင်ခံတဲ့သူတွေက ကင်ဆာဆဲလ် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ချေ ပုံမှန်ထက် ၂ဆခွဲ ပိုများပါတယ်။
· သင့်လျော်တဲ့ အဝတ်အစားကို ရွေးပါ – အဝတ်အစားကလည်း အရေပြားကို ကာကွယ်ဖို့ ကောင်းမွန်တဲ့ နောက်ထပ် ရွေးချယ်မှု တစ်ခုပါ။ ချည်သားများများပါပြီး သင်နဲ့ တော်တဲ့ အင်္ကျ ီရှည်၊ ဘောင်းဘီရှည်တွေကို ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ ဒီအဝတ်အစားတွေက သင့်ကို UV ရောင်ခြည်တွေကနေ အကောင်းဆုံး ကာကွယ်မှု ပေးမှာပါ။ ဒါ့အပြင် စိုတဲ့ တီရှပ်တွေက ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကို ကာကွယ်ပေးတဲ့နေရာမှာ ခြောက်တဲ့ တီရှပ်တွေထက် လျော့နည်းပါတယ်။ အရောင်ရင့်တာက အရောင်နုတာထက် ကာကွယ်မှု ပိုပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မျက်နှာ၊ ဦးခေါင်း၊ နား နဲ့ လည်ပင်းတို့ကို အရိပ်ရဖို့ လျှာထိုးကြီးကြီးနဲ့ ဦးထုပ်ကို ဆောင်းသင့်ပါတယ်။ canvas လိုမျိုး ချည်သားတွေက သင့်အရေပြားကို ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်တွေကနေ အကောင်းဆုံး ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ နေရောင်ခြည် ဖောက်ဝင်နိုင်တဲ့ အပေါက်တွေပါတဲ့ ကောက်ရိုးဦးထုပ်တွေကို ရှောင်ပါ။
· နေကာမျက်မှန် ဝတ်ဆင်ပါ – နေကာမျက်မှန်တွေက သင့်မျက်လုံးတွေကို ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်မထိအောင် ကာကွယ်ပေးရုံတင်မကပဲ သင့်မျက်လုံးပတ်လည်က နူးညံ့တဲ့ အရေပြား ဧရိယာတွေကို နေမလောင်အောင်လည်း ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ပတ်ပတ်လည် ကာထားတဲ့ နေကာမျက်မှန်တွေက UVA နဲ့ UVB ကို ၁၀၀% နီးပါး တားဆီးပေးပါတယ်။ UVA ရော UVB ပါ တားဆီးပေးနိုင်တဲ့ နေကာမျက်မှန်တွေက အကောင်းဆုံး အကာအကွယ်ကို ပေးနိုင်ပါတယ်။
အရေပြားကင်ဆာကို စောစောသိတာက သင့်အသက်ကို ကယ်နိုင်မယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့အားလုံး သိပါတယ်။ သင့်အရေပြားရဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ လက္ခဏာတွေကို သိပြီး ဆရာဝန်ရဲ့ စစ်ဆေးမှုကို အမြန်ဆုံး ခံယူပါ။ ဒါ့အပြင် သင့်အရေပြားကို ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကနေ ကာကွယ်ပြီး အရေပြားကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ချေကို တားဆီးတာ အကောင်းဆုံးပါ။
12 Ways to Protect Your Skin and Prevent Skin Cancer. http://www.webmd.com/melanoma-skin-cancer/features/12-ways-protect-skin-cancer?page=2. Accessed September 22, 2016.
Skin cancer. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/skin-cancer/basics/risk-factors/con-20031606. Accessed September 22, 2016.
Skin cancer. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/skin-cancer/basics/prevention/con-20031606. Accessed September 22, 2016.
Sun protection. http://www.skincancer.org/prevention/sun-protection/prevention-guidelines. Accessed September 22,